Dhallaanka hore u tahay 'ex' | Apg29
Aftonbladet qoray :
New York City ee dalka Mareykanka ayaa soo bandhigay a jinsiga sharci saddexaad. Waxaa loo yaqaan "X" oo da'da dadka magaalada kuwaas oo naftooda u aqoonsadaan sida nin iyo naag toona hadda ka badali karo jinsiga. Taas waxa loo sameeyaa adigoo buuxinaya foomka ah iyo xoogga saaraan in isbeddel la sameeyo si ay u "muujinayso aqoonsiga jinsiga run," ayuu qoray wargayska USA Today.
"Si dhan trans iyo non-binary ee New York: Waxaan aad aragto, waxaad maqli oo aad xushmeyso. Laga soo bilaabo 2019, oo dhan Yorkers New si ay u beddelaan jinsiga on shahaadada dhalashada si ay u M, F ama X - aan shahaado caafimaad, "duqa Bill de Blasio on Twitter. M yahay "nin," F ee "naag" (dumar) iyo X waa cusub oo dhexdhexaad ah, galmada.
ma ka dhigan tahay in ay bedeli karaan maskaxdooda in ay maalin maalmaha ka mid, qof dumar ah in dadka kale iyo "X" si saddexaad, iyadoo ku xiran sida ay dareemaan maalin ka maalin? Duniduna waxay u wareersan!
Waxaa runtii ka xumahay dadka ku jira maxaabiis u dareenkooda.
Waxaan ahaa gudaha ratsit.se meesha aad ka raadin kartaa dadka halka ka hor. Ma jiro "jinsiga" haddii aad tahay lab ama dhaddig, laakiin "jinsiga sharci". Waxay leeyihiin, in si kale loo dhigo, beddelo fikradaha.
Tani waxay sidoo kale ka dhigan tahay in marka "sharci jinsiga" iyo "jinsiga" ma aha wax la mid ah. "Gender" waa wax aad ku dhalatay iyo "sharci jinsiga" waa wax aad ka heli on taas oo aan in la sameeyo xaqiiqada.
Ka hor inta maanta, ayaan qoray oo ku saabsan naag miskiinka 26-sano jir ah Loui Sand u malaynaayo iyadu dhashay la jinsiga qaldan. Fadlan akhri maqaalka: Haddii aad dhalatay ee jirka qaldan, waxaad mar kale u dhalan karaa .
Weydii iyo guuleysto
Waxaan u baahan nahay labadaba ku baryayaaye, waayo, dadka oo iyaga ku guuleysan waayo, Ciise. Isagu waa badbaadadayda oo kaliya iyo samatabbixinta. In Ciise Masiix, waxaannu abaabulo nolosheena iyo aad u hesho aqoonsiga saxda ah.
laga cabsado waa haddii galmo been foisted carruurta aan waxba galabsan. Waalidiinta ee New York ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ku "X" ku saabsan ilmaha ay dhashay. Sidee xun! ilmaha A naftiisa of isagoo ah "ex" bilaabaa!
Duceeya carruurta iyo iyaga siin Ciise si ay u soo qabtaan isaga. Markaas ma ay noqon doontaa 'ex', laakiin ka dibna ay ku koraan kuwa dadka habboonaanta ammaan ah.